Imejuputa atumatu ihe eji eme ka ihe igwefoto na ihe omumu mutara - OMG Solutions
Itinye ntuziaka Mmemme Igwefoto Nwa-Nwa ahu na Ihe A Mụtara
Anyị ga-enyocha miri emi na mmejuputa atumatu Igwefoto-Worn, ntuziaka na nkuzi a mụtara na edemede a. N'afọ ndị gara aga, mmepe na teknụzụ nke ndị ụlọ ọrụ mmanye iwu ji arụ ọrụ ọsọsọ. Ọtụtụ ndị isi ndị uwe ojii na-ekpebi ma ha ga-enweta teknụzụ na-adabaghị mgbe ha malitere ọrụ ha — teknụzụ dị ka sọftụ ihu ihu, nyocha nke amụma, ngwa GPS, egbe ịchọpụta egbe, ndị na-agụ akwụkwọ ikike akpaaka, usoro nkwukọrịta na-eweta data ndị ọrụ ndị uwe ojii. Laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ ejiri aka, yana igwe mgbasa ozi iji nyochaa mpụ ma soro ọha na eze kwurịta.
Maka ọtụtụ ndị isi ndị uwe ojii, isi nsogbu abụghị ikpebi iji otu teknụzụ akọwapụtara mana kama ịchọta ngwakọta teknụzụ ziri ezi maka ikike enyere dabere na nsogbu mpụ ya, ọkwa ego, yana akụkụ ndị ọzọ. Chọta ngwakọta teknụzụ kachasị mma, agbanyeghị, ọ ga-amaliterịrị nghọta zuru oke nke ụdị uzu ọ bụla.
Ndị uwe ojii na-ahụ maka ndị ọrụ uwe ojii akpọpụtala igwe nwere uwe na-eyi uwe nwere ọtụtụ uru metụtara ngwaọrụ ndị a. Ha bụ ndị a na-ele anya na igwefoto ahụ na-eyi otu aka na-enyere aka ịgba akaebe; ọzụzụ onye isi; igbochi na idozi mkpesa nke ndi oha na eze webatara; na nghọta nke ndị uwe ojii, ịza ajụjụ, na arụmọrụ. Ọzọkwa, enyere ndị uwe ojii na-arụ ọrụ ugbu a n'ime ụwa nke onye ọ bụla nwere igwefoto ekwentị na-enwe ike idekọ vidiyo nke nzute ndị uwe ojii, igwe na - eyi uwe na - enyere ndị uwe ojii aka iji hụ na enwetara ihe omume site na onye ọrụ nche.
Edekọlarị mmekọrịta dị n'etiti onye uwe ojii na nwa amaala na mpaghara obodo n'ọtụtụ ụzọ. Nwa amaala nwere ike idekọ ya na ekwentị mkpanaka ya. Ọ bụrụ na nghọtahie na-eme, otu onye ma ọ bụ karịa lere ndị na-ekiri ihe merenụ anya. Ọtụtụ mgbe enwere kamera nchekwa echekwara na-emechi mmekọrịta ahụ. Yabụ ihe na-eme ọgụgụ isi karịa - ọ bụrụ na ịchọrọ ịza ajụjụ maka ndị gị yana ndị isi gị ndị ha na ha na-emekọrịta ihe, ị ga-enwekwa video site n'akụkụ onye ọrụ gị.
Ojiji nke igwe eji eme onyunyo na-eweli gi ajuju di mkpa banyere nzuzo na ntụkwasị obi. Kedu ihe ndị metụtara nzuzo metụtara idekọ ndị omekome metụtara? Kedu ka ndị ọrụ nche ga-esi kwado mmekọrịta obodo ma ọ bụrụ na enyere ha aka idekọ banyere ụdị mmekọrịta dị n'etiti ọha na eze? Ndị otu ọhaneze hà ga-achọpụta ya ma ọ bụrụ na onye uwe ojii agwa ya na ya na-edekọ ihe ahụ o mere ma ọ bụrụ na ọ bụ nke na-ezighi ezi? Igwefoto ndị uwe na-eyi na-agbagha ntụkwasị obi n'etiti ndị ọrụ na ndị isi ha n'ime ngalaba ndị uwe ojii?
Na mgbakwunye, banyere nchegbu ndị a dị mkpa, ndị isi ndị uwe ojii ga-ahụrịrị ọtụtụ nchegbu bara uru nke iwu, gụnyere ọnụego ego dị oke mkpa nke ibuga igwefoto na ịchekwa data edepụtara, ọrụ ọzụzụ, yana usoro na usoro a ga-anabata iji hụ na vidiyo igwe anaghị eyi. ga - enweta ihe na - adịghị mma.
Mmetụta mmekọrịta obodo
Site na ahụmịhe nke ndị isi ndị uwe ojii, ndị ọrụ ọrụ ya, na ndị ọkachamara ndị ọzọ, anyị na-aga na nsonaazụ Ahụ-Worn Cameras na mmekọrịta obodo. Ha kpughere ọtụtụ ihe:
Agingme obodo imeburu mmemme igwefoto nwere ike inye aka na ntinye aka dị nchebe maka mmemme a ma mee ka amata iwu amamịghe dị na obodo.
Ndị ụlọ ọrụ achọpụtala na ọ na-enye aka ịgwa ndị ọha, ndị ọrụ obodo, na ndị ọzọ metụtara ihe gbasara igwefoto a ga-eji rụọ ọrụ yana etu igwefoto ahụ ga-esi kpụzie ha.
Usoro mgbasa ozi bụ ụzọ bara uru iji mee ka njikọ ọhaneze kwụsị.
Ngosipụta nke iwu ụlọ ọrụ nke igwefoto na omume ya, ma ndị nke gara aga ma na-emejuputa ya, nwere ike inyere aka tinye nkwenye ọha na eze ma jụọ ụlọ ọrụ ajụjụ. Ihe omuma atu gosiputara na ntukwasi obi na websaiti ya na edeputara ngosiputa nke ihe ndia.
Chọ ndị isi ka ha dekọ oku maka ọrụ na mmemme mmanye iwu-karịa nzukọ ọ bụla na ọha - nwere ike ijide n'aka na a naghị amanye ndị uwe ojii idekọ ụdị mkparịta ụka na-enweghị isi dị mkpa iji wulite mmekọrịta na-ezighi ezi n'ime obodo.
N'ọnọdụ ebe ndị mmadụ na-achọghị ịkọrọ ndị mmadụ ihe banyere mpụ ma ọ bụrụ na-edekọ ha, ọ bụ iwu dị oke ọnụ inye ndị uwe ojii ikikere imebi kamera ha ma ọ bụ chọta ebe igwefoto ka ọdekọ naanị. Ndị ọrụ kwesịrị ịtụle ma ịnweta ozi ahụ ga-akwụ ụgwọ ihe ngosipụta dị oke egwu nke ijide nkwupụta na vidiyo.
Ordingdekọ oge ndị a na-eme mpụ nwere ike inyere ndị uwe ojii aka ijide nkwupụta na enweghị echiche ndị nwere ike inyere aka na nyocha ma ọ bụ ikpe na-esote?
N’ịchọ ndị ọrụ ka ha deba aha ha, n’ihe odide ma ọ bụ na igwefoto, ihe ndị kpatara ha ji agbanyụọ igwefoto na ọnọdụ a chọrọ ka ha dekọọ onye uwe ojii na-akwado nkwado.
Ndị ọrụ gọọmentị emeela ọtụtụ usoro iji mee ihe gbasara nchegbu ndị uwe ojii banyere igwefoto eyi. Dị ka ọtụtụ ndị isi ndị uwe ojii si kwuo, otu n'ime isi ihe maka ndị isi ụlọ ọrụ bụ ijikọ ndị uwe ojii na - emeghe ọnụ maka ihe ọ bụla igwe mmadụ na-eyi ga-apụta.
Dịka ọmụmaatụ, Ngalaba ndị uwe ojii Vacaville California nyochara ndị ọrụ ọrụ ma chọpụta na gụnyere ndị isi na mmejuputa usoro-yana ikwe ka ha nye ntinye dị mkpa-ha nwetara nkwado maka igwefoto. Ndị isi uwe ojii gụnyere Chief Lanpher of Aberdeen na Chief Chitwood nke Daytona Beach; Achọtala na ọ bara uru ịga nnọkọ ndị uweojii, ịkpọ oku, na nzukọ ndị nnọchi anya otu mkparịta ụka igwefoto. Maazị Michael Frazier nke prisetụnanya, Arizona kwupụtara echiche ya na ndị ọrụ ya na ya tinyere oge buru ibu na-ekwu okwu na nkenke na nzukọ ndị ọrụ niile ndị igwe ga-emetụta. Nke a nyere anyị aka inweta nkwado maka mmemme ahụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ uwe ojii kwupụtara echiche ha na ịmepụta otu mmejuputa mmejuputa nke mejupụtara ndị nnọchite anya sitere na nkeji dị iche iche n'ime ngalaba ahụ nwere ike inye aka kwalite usoro iwu igwefoto ahụ na-eyi. Dịka ọmụmaatụ, dịka ụlọ ọrụ na-ewulite iwu na sistemu igwefoto ahụ niile, ọ nwere ike ịba uru ịnata onyinye site n'aka ndị isi na ndị ọrụ nchekwa, ndị na-ahụ maka ọzụzụ, ndị ọrụ nyocha, ngalaba iwu, ndị ọrụ, ndị ọrụ nkwukọrịta, ndị na-ahụ maka njikwa ihe aka, na ndị ọzọ gafee ụlọ ọrụ ahụ ga-esonye igwefoto eyi. Ndị isi uwe ojii kwukwara na ọ dị mkpa imesi ndị uwe ojii ike na kamera ndị na-ahụ anya bụ ihe enyemaka nwere ike inyere ha aka ịrụ ọrụ ha. Chief Terry Gainer, onye isi ndị otu United States na-ahụ maka ogwe aka, na-ekwupụta na igwefoto igwe na-eyi uwe dịka nyocha na omume onye uwe ojii bụ ụzọ na-ezighi ezi. Ọ ga - abụ ihe siri ike ịgba ndị ọrụ anyị ume ka ha bụrụ ndị ọkachamara na - eme onwe ha nke anyị chọrọ ka ha bụrụ ma ọ bụrụ na anyị kwuo iyi nke a n'ihi na anyị na - atụ ụjọ na ị bụ onye ọjọọ, igwefoto ga - enyere gị aka igosipụta na ị dị mma. Ọ gara n’ihu kwuo na ekwesịrị ịhụ igwefoto ahụ dịka ihe eji emepụta ihe akaebe ga-enyere aka mee ka nchekwa ọha na eze pụta.
Onye isi ndị uwe ojii Executive Lieutenant John Carli nke Vacaville, California tụrụ aro ka ụlọ ọrụ gbara gburugburu igwefoto dị ka ihe nkuzi, karịa inye ọzụzụ, site na ịgba ndị ọrụ nlekọta ume ka ha na ndị ọrụ nche nyochaa vidiyo vidiyo ma nye nzaghachi na-arụpụta ihe. Otu aro iji mezuo ebumnuche a bụ gosi ndị ọrụ vidiyo na-ekpughe ọmarịcha arụmọrụ site n'igosi ihe ngosi ha na mmemme ọzụzụ ma ọ bụ site na igosi vidiyo ahụ n'oge emume onyinye.
Uru nke Igwefoto ahụ mere:
Ugbu a, anyị ga-eweta ụfọdụ uru nke igwefoto ndị uwe na-eyi n'ahụmahụ nke ndị isi uwe ojii. E nwere nghọta dị n'etiti ha na igwefoto ndị merela ahụ bụ ihe bara uru. Uru ndị a gụnyere ndị a:
Thenme ka ndị uwe ojii na-emeziwanye ihe site na ịkwụsịtụ ihe na-eme na ihe gbasara ọha na ndị ọrụ ọrụ. A ga-enwe akụkọ ndebiri dị otu a n'etiti ndị ọhaneze na ndị isi
Ikwusi onodu ojoo site na imezi ka onye okacha mara ihe na ihe omume ndi mmadu. Ọhaneze na-eme mkpesa banyere omume ọjọọ nke ndị uwe ojii. Enwere ike ịkwụsị nke a site na iweta mmezi nke ndị ọrụ ndị uwe ojii
Idozi ihe ndị metụtara ndị uwe ojii na mkpesa site na inye nkọwapụta nke ihe mere. Ihe ndekọ a ga-ekwe omume naanị ma a bịa na mmejuputa atumatu igwefoto eyi na Ulo oru mmanye
Meziwanye nghọta nke ụlọ ọrụ site na ịhapụ ọha mmadụ ka ha kirie ihe ngosi vidiyo nke ọrụ ndị uwe ojii na ndị ha na-ezute. Ngosipụta dị mkpa dị mkpa maka mmekọrịta dị mma n'etiti ngalaba ọha na ndị uwe ojii
Ifyingmata ma dozie nsogbu ụlọ ọrụ dị na imebi site na ịkọwa ndị isi ndị mere ihe ọjọọ na nsogbu ụlọ ọrụ
Performanceme ka onye ọrụ na-arụ ọrụ dịkwuo mma site na iji ndekọ vidiyo maka ọzụzụ onye ọrụ na nlele
Vingbawanye akwụkwọ nnabata maka nyocha na ikpe
N'ịchịkọta, anyị na-atụ aro na Alọ Ọrụ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Iwu Mmepụta Iwu kwesịrị ịmalite usoro edepụtara edepụtara zuru ezu tupu mmejuputa mmemme igwefoto eyi. Atumatu kwesiri ichota zuru oke iji nye ntuzi aka doro anya ma tukwasie obi ma gha enye ohere ka odi ike karia ihe omume a. Mgbe ị na-etolite amụma, ọ bara uru ịgakwuru ndị nlekọta na ndị isi ọrụ, ndị ikpe, ndị uwe ojii, ndị ndụmọdụ gbasara iwu na ndị obodo. Ndị ọrụ gọọmentị kwesịrị ịme ka ndị ọhaneze nwee ike ịnweta atumatu.
Igwe eji eme onodu ahu na-ewelite otutu ulo oru nke ulo oru aghaghi ichebara n’uche ka ha ji amuma ha. Ndị a gụnyere nsonaazụ nke igwefoto nwere na nzuzo na mmekọrịta obodo, nchegbu nke ndị ọrụ mgbago ihu, atụmanya nke igwefoto na-ebute, na ọnụego ego.
Nzuzo 5134 1 Echiche Taa